CNC service - China Ruizheng Industry
Afaka ny fandraisana isan-karazany ny fametrahana mazava tsara ny faritra toy ny fitakiana isan-mpanjifa. Excellent asa kanto, tonga amin'ny fotoana ilana lahateny. OEM mpanamboatra manara-penitra, mifaninana vidiny. 1.Product sehatra: Machining fohy zana faritra, fohy zana milina, nijoro faritra, varahina zana milina fametrahana mazava tsara ny faritra, faritra fametrahana mazava tsara, varahina nitodika faritra, CNC mihaohao sy fihodinana faritra. 2.Material: Carbon vy, Stainless vy, aliminioma, varahina, varahina, varahina, free fanapahana vy, na araka ny fangatahana mpanjifa. 3.Processi ...
Afaka ny fandraisana isan-karazany ny fametrahana mazava tsara ny faritra toy ny fitakiana isan-mpanjifa.
1.Product sehatra: Machining fohy zana faritra, fohy zana milina, nijoro faritra, varahina zana milina fametrahana mazava tsara ny faritra, faritra fametrahana mazava tsara, varahina nitodika faritra, CNC mihaohao sy fihodinana faritra.
2.Material: Carbon vy, Stainless vy, aliminioma, varahina, varahina, varahina, free fanapahana vy, na araka ny fangatahana mpanjifa.
3.Processing milina: CNC milina, machining foibe, milina mitoto vary, mahazatra lathe milina, mihaohao milina, ary atsofony milina, tariby fanapahana milina, milina mandeha ho azy barany, Soisa screws milina.
4.Finishing: Zinc voapetaka, voapetaka nikela, Chrome voapetaka, phosphating, Nikosokosoka, tranga mafy hatoka, carburization hamafin'ny, anodizing, mainty azôty.
5.Testing toerana: projection milina, fahombiazana Mpamantatra, hamafin Mpamantatra, concentricity Ester.
6.Package: Inner harona plastika, baoritra ivelany, entana feno, na eo amin'ny fepetra.
7.OEM mandray: amin'ny za-draharaha ara-teknika injeniera sy ny fitaovana maoderina nanara-maso, ny orinasa dia afaka manampy anao mba hampidina vidin'ny-penitra.
Any in Dongguan ao Shina, isika dia mpanamboatra izay manome machining manokana eo amin'ny fanompoana araka ny mpanjifa 'fangatahana sy ny famaritana sary, na kely na be dia be no azo ekena ho antsika
Previous: Miverena bary foibe
Manaraka: Sheet vy Fittings
nohitsakitsahiko faritra Shina